Washington State Drive-In WiFi Hotspots Goob Raadiyaha - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Washington State Drive-In WiFi Hotspots Goobta Goobta
Kusoo dhawow Washington State Drive-In WiFi Hotspots Goob Raadiyaha
Iyada oo laga jawaabayo saameynta COVID-19, Wadid-In Goobaha WiFi Bixiso marin ku-meel-gaar ah oo internet-ka ah oo deg-deg ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka reer Washington ee aan adeegga ballaadhan u hayn guryahooda.
Kudar goob kulkulul cusub
Dadka degan Seattle waxay sidoo kale ka heli karaan goobo dheeraad ah gudaha: http://www.seattle.gov/tech/services/internet-access/free-public-wi-fi
Helitaanka ayaa loo heli karaa dhammaan dadka deegaanka iyadoo xoogga la saarayo barashada fog ee ardayda. Intaa waxaa sii dheer, adeeggan waxaa loo isticmaali karaa shaqo raadinta, taleefannada, shaqada taleefanka, diiwaangelinta shaqo la'aanta, iyo kaqeybgalka tirakoobka.
Goobaha ku taxan khariidadan waxay matalayaan goobo cusub oo Drive-In WiFi Hotspot ah oo ku yaal goobaha Fiditaanka Jaamacadda Washington State, iyo sidoo kale cusub iyo hadda jira Drive-In WiFi Hotspots.
Bilaabidda ugu horreyn ahaan sida meelaha gawaarida la dhigto ee jawaabta cudurka faafa ee COVID-19, bulshada bilaashka ah ee Wi-Fi waa la heli karaa iyada oo aan loo eegin sida isticmaaleyaashu u yimaadaan goobaha. Bogagga qaarkood waxay kaloo bixiyaan gelitaanka dadweynaha ee gudaha inta lagu jiro saacadaha shaqada. Qof kasta oo isticmaalaya boggaga - bannaanka ama gudaha - waa inuu ku celceliyo kala fogaanshaha bulshada iyo taxaddarrada nadaafadda, oo ay ku jiraan joogitaanka gaarigaaga ama ugu yaraan lix fuudh oo isticmaalayaasha kale iyo xirashada maaskaro haddii loo baahdo.
Goob kasta oo kulkulul waxay lahaan doontaa borotokool u gaar ah oo amni. Qaarkood way furi doonaan kuwa kalena waxay leeyihiin nabadgelyo ammaan ah oo lagu rakibo carruurta ee Sharciga Ilaalinta Internetka ee Carruurta (CIPA). Meelaha maktabadda guud ee wifi-wifi, fadlan toos ula xiriir nidaamka maktabadda dadweynaha haddii aad dhibaatooyin la kulanto ama aad su'aalo qabtid.
Sinnaanta Broadband ma aha oo kaliya caqabad miyi. Mashruuca hotspot-In-Wi-Fi-ka wuxuu wax ka qabtaa bulshooyinka aan liidanin iyo kuwa dhaqaale ahaan liita ee ku nool magaalooyinka iyo hareeraha sidoo kale.
Xafiiska Broadband-ka ee Gobolka Washington wuxuu ku qiyaasayaa in ka badan 300 cusub oo ah meelaha Wi-Fi ee meelaha lagu kulmo ay ka imaanayaan khadka tooska ah gobolka oo dhan iyada oo loo marayo dadaal lagu keenayo helitaanka khadka internetka ee dadweynaha oo dhan bilaash. Wada-hawlgalayaasha mashruuca wadista Wi-Fi ee gobolka waxaa ka mid ah: Jaamacadda Washington State; Maktabadda Gobolka Washington, oo qayb ka ah Xafiiska Washington ee Xoghayaha Gobolka; xubno ka tirsan Ururka Degmooyinka Adeegyada Dadweynaha ee Washington (WPUDA) iyo bahwadaag aan macaash doon ahayn oo loo yaqaan 'Northwest Open Access Network' (NoaNet); Xafiiska Broadband State ee Gobolka Washington; Ururka Isgaarsiinta Madaxa-bannaan ee Washington (WITA); Xalka Teknolojiyada Washington (WaTech); iyo Xafiiska Kormeeraha guud ee waxbarashada dadweynaha (OSPI). Microsoft iyo Avista Foundation ayaa bixinaya maalgelin, iyo Xarunta Kheyraadka Masiibooyinka ee Teknolojiyada Macluumaadka (ITDRC), oo ah qalab qaran oo aan faa'iido doon ahayn iyo rakibidda.
Xiriirinta Gobolka / Federaalka iyo COVID-19
Natiijooyinka Sahaminta Sahaminta Broadband iyo Xawaaraha
Sahaminta Broadband iyo Xawaaraha
Wadid-in WiFi Hotspot Finder
Tilmaamaha Amniga ee Adeegsiga WiFi-ga Dadweynaha
Xaashida Xaqiiqda ee Wada Shaqeynta Gobolka oo dhan
Xafiiska Broadband Office 2020 Warbixinta
Xarig-ballaadhan Washington 2019
Guddiga Howlaha Guud - Maalgelinta Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Gobolka
CERB - Dhismaha iyo Maalgelinta Qorshaynta Miyiga Xadka
2.5 GHz Daaqadda Qabyaaladda Miyiga: Sida loo Diiwaan Galiyo
Barnaamijka USDA ReConnect Loan iyo Grant
Khadka Khariidadda Barnaamijka U-qalma Dib-U-Xiriir
Deeqaha Isku xidhka Bulshada ee USDA
USDA Fogaanta Barashada & Deeqaha Telemedicine
Tilmaamaha Buuxda ee NTIA ee Maalgelinta Broadband Federal
La xiriir Xafiiska Broadband State ee Gobolka Washington
Si aad iskaga diiwaangeliso wixii cusbooneysiin ah ee Xafiiska Gobolka ee Ballaadhinta ee Gobolka Washington, kaliya ku qor emaylkaaga hoosta.